सामाजिक सबै कुरा को विरोधी? साँच्चै? | Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 16, 2010 सोमबार, डिसेम्बर 29, 2014 Douglas Karr
वाह, यो कथनबाट आएको हो Avinash घोस्टब्लगिंगमा:
यदि तपाईंसँग ब्लग गर्न समय छैन भने हैन। भूत ब्लगिa अप्राकृतिक र सामाजिक केहि एंटीथेसिस हो। #dontbeafake cc mitchjoel
- अविनाश कौशिक (@avinash) अगस्ट 16, 2010
यो जहिले पनि चाखलाग्दो हुन्छ जब कुनै व्यक्तिसँग जति धेरै अधिकार छ मिच or Avinash बाहिर फाल्छ नियम यो जस्तो। म केवल अविनाशसँग असहमत मात्र हुँ, मलाई धेरै धेरै कम्पनिहरू चिन्छन् जसले असहमत हुन्छन्। घोस्टब्लगिंग सामाजिक केहि चीजको विरोधी छैन ... अमानवीयता, बेइमानी, र ins insrity सामाजिक सबै कुराको विरोधी हो।
कम्पनीहरु लाई वर्षहरु मा उचित संसाधनहरु बिना यति धेरै गर्न को लागी संचालित गरिएको छ। एक्सेन्चरले हालसालै एउटा अध्ययन गर्यो जुन त्यो पहिचान गर्दछ अपर्याप्त बजेट, सीपको कमी, र अपर्याप्त उपकरणहरू विपणन विभाग असफल पछाडि एक प्रेरणा शक्ति हो।
के हुन्छ यदि तपाईंको कम्पनीसँग बजेट छैन, सीप छैन वा ब्लगमा टुल छैन? यद्यपि तपाईको कम्पनीले ज्ञानको दुबै प्रकाशन गर्न र अविश्वसनीय ग्राहक कथाहरू अनलाइन साझेदारी गर्ने इच्छा राख्दछ। तिनीहरूले यो घोस्टब्लोगरहरूको साथ सस्तोमा गर्न सक्दछन् - जसले प्रभावकारी रूपमा कसरी लेख्ने, कसरी कुञ्जीशब्दहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, र ग्राहकहरूको सफलताको अनुगमन गर्न आवश्यक उपकरणहरू छन् भनेर बुझ्छन्। घोस्टब्लगर्सले यसलाई अझ राम्रो, द्रुत र अधिक परिणामका साथ गर्न सक्दछन्।
मसँग केही ब्लगरहरू छन् Martech Zone त्यो मैले गरें घोस्टब्लग गरिएको किनभने ... किनकि उनीहरूले मलाई भनेको कुरा उनीहरूको लागि अभाव नै छ। त्यसो भए, मैले उनीहरूसँग अनुभव गरेको वैध प्रश्नलाई ईमेल गरे। तिनीहरूले मद्दत गर्न सक्ने केहि संसाधनहरू अनलाइनका साथ जवाफ फिर्ता लेखे। त्यसपछि मैले उनीहरूको ईमेल लिएँ, यसलाई प्रभावी ब्लग पोष्टमा खोजियो र उनीहरूको नाममा पोष्ट गर्न तिनीहरूको अनुमति मागेँ। प्रत्येक पटक व्यक्ति सजिलैसँग सहमत भयो र पोष्ट गरेकोमा मलाई धन्यवाद।
मैले साझेदारी गरेन जुन मैले वास्तवमै पोष्ट लेखेको थिएँ ... मैले भर्खरै प्रश्न सोधें। प्रतिक्रिया ईमान्दार, प्रामाणिक थियो, र हाम्रा दर्शकहरूसँग बहुमूल्य जानकारी साझा गर्‍यो। अर्को शब्दहरुमा, हामी घोस्टब्लग र पाठकलाई मूल्य प्रदान गर्‍यौं। के यो सामाजिकको विरोधाभास हो? मलाई लाग्दैन! यद्यपि म अविनाशलाई धेरै सम्मान गर्दछु, ऊ त्यस्तो छैन सबै कुराको सामाजिक राख्ने नेट मा। आफ्नो मन बनाउनुहोस्। यदि यो प्रभावी छ भने, यो गर्नुहोस्। यदि यो होईन भने हुन्न।
मैले बारम्बार भनेको छु ... तपाईलाई लाग्छ कि बराक ओबामा, हाम्रो समयका सर्वश्रेष्ठ वक्ताहरू मध्ये एक, निष्पक्ष छन् किनभने उनले आफ्नै भाषणहरू लेखेका छैनन्? के हामी उसलाई बूढो पार्छौं र बताउँदछौं कि सार्वजनिक बोलीले प्रस्ताव राख्ने सबै कुराको एंटीथेसिस हो? No! हामी जान्दछौं कि स्वतन्त्र संसारको नेताको रूपमा उनीसँग संसाधन छ कि जसले उनको आवाजलाई दिमागमा राखेर भाषणहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंसँग लेख्न समय छैन तर तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू वा सेवाहरूमा शब्द प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ ... र तपाईं ईमान्दार र प्रामाणिक हुन चाहानुहुन्छ, घोस्टब्लगिaराम्रो रणनीति हुन सक्छ। मbपैसाको पपको लागि लेख अनलाइन जाने र खरीद गर्ने कुरा गरिरहेको छैन। मँ साटो एउटा राम्रोसँग लेखिएको ब्लग पोष्ट हुन्थी जसले पाठकलाई उनीहरूले खोजेको कम्पनीबाट आवश्यक जानकारी प्रदान गर्थ्यो… बरु कुनै सीईओबाट हतारमा, डरलाग्दो लिखित ब्लग पोष्ट समय भन्दा।
र पक्कै पनि, म बेइमानीको वकालत गरिरहेको छैन। यदि तपाइँ कसले आफ्नो ब्ल्ग लेख्दै छ भनेर चुनौती गरिएको छ भने, सत्य बताउनुहोस्! तपाईंको भूत ब्लगरले तपाईंलाई यसको लागि प्रेम गर्दछ।
PS: मेरो सबै ब्लग पोष्टहरू म द्वारा लेखिएको थियो।
टैग: अविनाशअविनाश कौशिकघोस्टब्लगिंगमिच जोएल